Ismaaciil Cusmaan "Guddiyada doorashada waxaa ku jira xubno aan aqaan oo Nabadsugida ah" -
Home News Ismaaciil Cusmaan “Guddiyada doorashada waxaa ku jira xubno aan aqaan oo Nabadsugida...
Taliye kuxigeenkii hore ee Nabadsugida Ismaaciil Cusmaan ayaa sheegay in Guddiyada doorashada ee dowladda magacawday aanay aheyn mid maslaxad u ah dalka, isagoo xusay in haddii la isku dayo in guddiyadaas doorasho lagu aado uu dalka gelin karo qalalaase siyaasadeed.
Ismaaciil Cusmaan oo wareysi siiyay Radio Risaala ayaa sheegay in Guddiyada doorashada heer Federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku jiraan xubno uu yaqaano oo ka tirsan Nabadsugida.
“Illaa shan qof oo aan aqaano ayaa ku jira Guddiga heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada”ayuu yiri Ismaaciil Cusmaan.
Waxaa uu sheegay hadalkii shalay ka soo yeeray Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ay caddeyn u tahay sida ay dowladda u dooneyso inay u boobto doorashada Federaalka, si la mid ah doorashooyinkii ka dhacay Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabelle.
Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa dhowaan ka soo horjeestay guddiyada doorashada ay dowladdu magacawday, waxaana ay ka digeen in qalqal siyaasadeed iyo mid amni uu dalku galo, maadaama ay ku jiraan xubno ka tirsan Ciidanka Nabadsugida iyo shaqaalaha dowladda.
Previous articleGuddiga Doorashada Xildhibaannada Banaadiriga oo la magacaabay (Akhriso)
Next articleFraudulent and unfair election in Somalia: A time to learn from the past